XAQIIQ: Marcelo Oo Noqday Boqorka Gool Caawinta Difaacyada Ee Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Waa Wayn Iyo Kulamadii Uu Caawinta Sameeyay. - Laacib.net
XAQIIQ: Marcelo Oo Noqday Boqorka Gool Caawinta Difaacyada Ee Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Waa Wayn Iyo Kulamadii Uu Caawinta Sameeyay.
Xidiga xulka qaranka Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Marcelo ayaa qaadanaya xili ciyaareedkiisii abid ugu fiicnaa wuxuuna door wayn ku lahaa in Real Madrid ay xili ciyaareedkan si wayn ugu tartamayso labada koob ee La Ligaha iyo Champions Leaque-ga.
Marcelo ayaa noqday difaac bidix ama midig ee xili ciyaareedkan gool caawinta ugu badan ka sameeyay shanta horyaal ee yurub ugu waa wayn. Dhinaca gool caawinta horyaalka La Ligaha waxaa Marcelo ka horeeya saddex ciyaartoy oo kaliya, mana jiro hal difaac oo heerka gool caawintiisa gaadhayaa.
Kulankii Celta Vigo ayuu Marcelo sameeyay gool caawintiisii 10 aad ee horyaalka La ligaha kadib markii uu kulankii Estadio Balaidos uu Karim Benzema ka caawiyay in uu Real Madrid u dhaliyo goolkeedii saddexaad. Luis Suarez, Neymar JR iyo Toni Kroos oo kaliya ayaa Marcelo xili ciyaareedkan kaga sareeya gool caawinta La Ligaha.
Sidaa daraadeed, ma jiro difaac horyaalka Spain ka ciyaara oo Marcelo ku gaadhaya gool caawinta La ligha si la mid ah shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn. Marcelo ayaa gool caawintiisii ugu horaysay ee xili ciyaareedkan u sameeyay Alvaro Morata intii lagu jiray kulankii Alaves ee garoonka Estadio Mendizorroza si la mid ah waxa uu isla kulankan caawin u sameeyay Cristiano Ronaldo.
Marcelo ayaa sidoo kale Ronaldo gool caawin u sameeyay kulamadii Granada iyo Real Betis. Kooxaha kale ee gool caawinta Marcelo dhibanaha u soo noqday wawxaa ka mid ah Osasuna, Valencia, Villarreal, Sporting Gijon, iyo Barcelona.
Marcelo ayaa xili ciyaareedkan difaacashada booskiisa waxa uu kaga saree maray hal abuurka iyo in uu si wayn u soo caawiyay dhismaha weerar ee kooxdiisa Real Madrid. Dhinaca kale Marcelo iyo Carvajal ayaa ah labada difaac baalood ee xili ciyaareedkan ugu saamaynta badan.